Presentation skills (Language-1) - Myanmar Network
Presentation skills (Language-1)
Posted by zar ni (My Way!) on June 10, 2012 at 10:54 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
presentation လုပ်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအသုံးဟာပုံသေစကားစုတွေနဲ့ပြည့်နှက်လို့နေပါတယ်။ ကိုယ်တင်ပြမည့်အကြောင်းအရာ
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိနေတယ်ဆိုရင်တောင် ဘာသာစကားကန့်သတ်ချက်ရှိနေရင် အခက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီစကားစုတွေကို သိထားရင် စင်ပေါ်မှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
Startingapresentation (ဟောပြောမှုစတင်ခြင်း)
Get people's attention (ဟောပြောပွဲမစခင်မှာ ရောက်တတ်ရာရာစကားတွေပြောနေမှာဖြစ်တဲ့၊ ဆူညံနေတဲ့ပရိတ်သတ်ရဲ့အာရုံကို ကိုယ့်ဆီရောက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း)
Welcome them (ပရိတ်သတ်ကိုကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခြင်း)
Introduce yourself (မိမိကိုယ်ကို ပရိတ်သတ်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း)
State the purpose of your presentation (မိမိပြောမည့်အကြောင်းအရာ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်ပြခြင်း)
State how you want to deal with questions (မေးခွန်းတွေကို ဘယ်လိုပြန်လည်ဖြေဆိုပေးမယ်ဆိုတာအသိပေးခြင်း)
If I could have everybody's attention. (တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော့်ကိုအာရုံစိုက်ပေးနိုင်မလားခင်ဗျာ)
If we can start. (စလို့ရပြီလားခင်ဗျာ)
Perhaps we should begin? (စသင့်ပြီထင်ပါတယ်နော်)
Let's get started. (စလိုက်ကြပါစို့)
Welcome to Microsoft. (မိုက်ခရိုဆော့ဖ်မှကြိုဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ)
Thank you for coming today. (ဒီနေ့ ဒီကိုကြွရောက်လာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်)
Good morning, ladies and gentlemen. (မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ ပရိတ်သတ်ကြီးခင်ဗျာ)
On behalf of Intel, I'd like to welcome you. (အင်တဲလ်ကုမ္ပဏီရဲ့ကိုယ်စား ပရိတ်သတ်ကြီးကိုကြိုဆိုပါရစေ)
My name's Jane Shaw. I'm responsible for travel arrangements. (ကျွန်မနာမည် Jane Shaw ပါ။ ကျွန်မကခရီးသွားအစီအစဉ်တွေကိုတာဝန်ယူရပါတယ်။)
For those of you who don't know me, my name's Tom Stotter. (ကျွန်တော့်ကိုမသိသေးသူများအတွက် ကျွန်တော့်နာမည် Tom Stotter ပါ။)
As you know, I'm in charge of public relations. (အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော် က ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအကြီးအကဲဖြစ်ပါတယ်။)
I'm the new Marketing Manager. (ကျွန်တော်ကတော့ ဈေးကွက်မန်နေဂျာအသစ်ဖြစ်ပါတယ်။)
State the purpose of your presentation
This morning I'd like to present our new processor. (ဒီမနက်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပါမောက္ခအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။)
Today I'd like to discuss our failures in the Japanese market and suggestanew approach. (ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ ဂျပန်ဈေးကွက်မှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကို ဆွေးနွေးပြီး ချဉ်းကပ်ပုံနည်းလမ်းသစ်တစ်ခုအကြံပြုလိုပါတယ်။)
This afternoon, I'd like to report on my study into the German market. (ဒီနေ့လည်ခင်းမှာ ဂျာမန်ဈေးကွက်အကြောင်း ကျွန်တော့်ရဲ့လေ့လာမှုကို တင်ပြလိုပါတယ်။)
(ဒီမနက်ကျွန်တော့်ဆန္ဒကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းစနစ်သစ်အကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။)
State how you want to deal with questions.
If you have any questions, I'll be happy to answer them as we go along. (မေးစရာမေးခွန်းများရှိခဲ့ရင်မေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောနေရင်းနဲ့ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသွားပါ့မယ်။)
Feel free to ask any questions. (မေးခွန်းများမေးကြပါ။ အားမနာပါနဲ့ခင်ဗျာ။)
Perhaps we can leave any questions you have until the end? (မေးစရာမေးခွန်းများရှိခဲ့ရင် အဆုံးကျမှမေးဖို့ဖြစ်နိုင်မလားခင်ဗျာ)
There will be plenty of time for questions at the end. (ကျွန်တော့်တင်ပြမှုအဆုံးမှာ မေးခွန်းတွေအတွက်အချိန်အများကြီးပေးထားပါတယ်။)
presentation တစ်ခုဟာ အဆင့်သုံးဆင့်၊ သို့မဟုတ် လေးဆင့် စသည်ဖြင့်အဆင့်တွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ တင်ပြဆွေးနွေးနေချိန်အတွင်းမှာ အပိုင်းတစ်ခုကနေ နောက်တစ်ပိုင်း၊ အချက်တစ်ချက် ကနေ နောက်တစ်ချက်ပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင် ထိုသို့ပြောင်းတော့မယ့်အကြောင်း ပရိတ်သတ်လိုက်နိုင်အောင် အချက်ပြစကားလေးတွေပြောပေးရပါတယ်။ ဒါကို signposting လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုစကားစုလေးတွေကိုအလွတ်ကျက်မှတ်ထားမှသာစိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခြေအနေမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာပါ။
When you want to make your next point, you ‘move on’. နောက်အချက်တစ်ချက်ပြောချင်ရင် “move on” ဆက်သွားရပါမယ်။
Moving on to the next point. (နောက်တစ်ချက်ကိုပြောရရင်တော့)
I’d like to move on to the next point if there are no further questions (မေးခွန်းတွေမေးဖို့မရှိတော့ဘူးဆိုရင် နောက်တစ်ခုကို သွားချင်ပါတယ်။)
When you want to change toacompletely different topic, you ‘turn to’. (လုံးဝခြားနားတဲ့
အကြောင်းအရာကိုပြောင်းပြောချင်တဲ့အခါ “turn to” . . . ဘက်လှည့် ပါတယ်။
I’d like to turn to something completely different. (တခြားကွဲပြားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုဘက်လှည့်ချင်ပါတယ်။)
Let’s turn now to our plans for next year. (အခု နောက်နှစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေဘက်လှည့်ကြပါစို့။)
When you want to give more details aboutatopic you ‘expand’ or ‘elaborate’. အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေရှင်းပြချင်တဲ့အခါ ‘expand’ or ‘elaborate’ လုပ်ပါတယ်။
I’d like to expand more on this problem we have had in Chicago. (ရှီကာဂို ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာအကြောင်းအကျယ်တ၀င့်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။)
Would you like me to expandalittle more on that or have you understood enough?
(ဒီအကြောင်းနည်းနည်းထပ်ရှင်းပြစေချင်သလား။ ဒါမှမဟုတ် အားလုံးသဘောပေါက်ပါရဲ့လား။)
I don’t want to elaborate any more on that as I’m short of time.
When you want to talk about something which is off the topic of your presentation, you ‘digress’. ကိုယ် presentation နဲ့မဆိုင်တဲ့ပြင်ပကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလမ်းကြောင်းပြောင်း သွားချင်တဲ့အခါ “digress” လုပ်ပါတယ်။
I’d like to digress here foramoment and just sayaword of thanks to Bob for organizing this meeting.
(ကျွန်တော်ခဏလောက်ဘေးချော်ပြီးဒီအစည်းအဝေးကိုစီစဉ်ပေးတဲ့ ဘော့ပ်ကို ကျေးဇူးတင်စကားလေးနည်းနည်းပြောပါရစေ။)
Digressing foramoment, I’d like to sayafew words about our problems in Chicago.
When you want to refer back to an earlier point, you ‘go back’.
(အရင်ပြောပြီးသားအချက်တစ်ခုကိုပြန်ညွှန်းချင်တယ်ဆိုရင် “go back” လုပ်ပါတယ်။
Going back to something I said earlier, the situation in Chicago is serious.
(ခုဏလေးကပြောခဲ့တာကိုပြန်သွားရမယ်ဆိုရင် ရှီကာဂိုကအခြေအနေတွေဟာ တကယ့်ကိုအရေးတကြီးဖြစ်နေပါပြီ။)
I’d like to go back to something Jenny said in her presentation.
(ဂျန်နီရဲ့ သူ့ Presentation ထဲမှာ ပြောခဲ့တာတစ်ခုကိုပြန်သွားချင်ပါတယ်။)
To just give the outline ofapoint, you ’summarize’.
အချက်တစ်ခု၊ ပြောခဲ့တာတွေရဲ့အကျဉ်းချုပ်ကိုပေးချင်တဲ့အခါ “summarize” လုပ်ပါတယ်။
If I could just summarizeafew points from John’s report.
(ဂျိုးရဲ့အစီရင်ခံစာကနေ အချက်တစ်ချို့ အကျဉ်းချုပ်ပြောရရင်တော့...)
I don’t havealot of time left so I’m going to summarize the next few points.
(အချိန်အများကြီးမကျန်တော့တဲ့အတွက် ကျန်တဲ့အချက်တွေကို အကျဉ်းချုပ်ပြောပါ့မယ်။)
To repeat the main points of what you have said, you ‘recap’.
ကိုယ်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာရဲ့ အဓိကအချက်ကိုပြန်ထပ်ပြောချင်တဲ့အခါ “recap” လုပ်ပါတယ်။
I’d like to quickly recap the main points of my presentation.
(ကျွန်တော်တင်ပြသွားတာတွေရဲ့အဓိကအချက်တွေကိုပြန်ထပ်ပြောရရင်. . . )
Recapping quickly on what was said before lunch,……
(နေ့လည်စာမတိုင်ခင်ကပြောသွားတာတွေကို အမြန်ပြန်ဆွေးနွေးရရင် . . .)
For your final remarks, you ‘conclude’. အဆုံးသတ်မှတ်ချက်၊ ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကိုပြောချင်တဲ့အခါ “conclude”လုပ်ပါတယ်။
I’d like to conclude by leaving you with this thought ……
(. . . ဆိုတဲ့ ဒီစိတ်ကူးလေးကို လူကြီးမင်းတို့ထံပေးခဲ့ရင်းနိဂုံးချုပ်လိုက်ချင်ပါတယ်။)
If I may conclude by quoting Karl Marx …….
(ကားလ်မတ်စ် ကိုကိုးကားပြီးနိဂုံးချုပ်ရမယ်ဆိုရင် . . .)
ဒီဆောင်းပါးပါ အချက်အလက်အကြောင်းအရာအားလုံးရဲ့မူရင်းဟာ ဒီ http://www.effective-public-speaking.com/index.html ဆိုက်ကဖြစ်ပါတယ်။
This morning I'd like to present our new processor. (ဒီမနက်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပါမောက္ခအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။) အစား This morning I'd like to present our new processor. (ဒီမနက်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။) လို့ပြင်ပြီးဖတ်ပေးပါရန်။ ကျွန်တော်သေသေချာချာမကြည့်ဘဲမှားပြီးရိုက်မိလိုက်တာပါ။ အပေါ်မှာပြင်လိုက်ရင်အောက်က comment တွေအလကားဖြစ်သွားမှာမလို့ပါ။
presentation လုပျရာမှာအသုံးပွုတဲ့ အင်ျဂလိပျစာအသုံးဟာပုံသစေကားစုတှနေဲ့ပွညျ့နှကျလို့နပေါတယျ။ ကိုယျတငျပွမညျ့အကွောငျးအရာ
ဘာသာရပျဆိုငျရာမှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယုံကွညျမှုရှိနတေယျဆိုရငျတောငျ ဘာသာစကားကနျ့သတျခကျြရှိနရေငျ အခကျတှပေ့ါလိမျ့မယျ။ အဲဒီစကားစုတှကေို သိထားရငျ စငျပျေါမှာကွောကျစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
Startingapresentation (ဟောပွောမှုစတငျခွငျး)
Get people's attention (ဟောပွောပှဲမစခငျမှာ ရောကျတတျရာရာစကားတှပွေောနမှောဖွဈတဲ့၊ ဆူညံနတေဲ့ပရိတျသတျရဲ့အာရုံကို ကိုယျ့ဆီရောကျအောငျပွုလုပျခွငျး)
Welcome them (ပရိတျသတျကိုကွိုဆိုနှုတျဆကျခွငျး)
Introduce yourself (မိမိကိုယျကို ပရိတျသတျနှငျ့မိတျဆကျပေးခွငျး)
State the purpose of your presentation (မိမိပွောမညျ့အကွောငျးအရာ၏ရညျရှယျခကျြကိုတငျပွခွငျး)
State how you want to deal with questions (မေးခှနျးတှကေို ဘယျလိုပွနျလညျဖွဆေိုပေးမယျဆိုတာအသိပေးခွငျး)
If I could have everybody's attention. (တဈခကျြလောကျကြှနျတေျာ့ကိုအာရုံစိုကျပေးနိုငျမလားခငျဗြာ)
If we can start. (စလို့ရပွီလားခငျဗြာ)
Perhaps we should begin? (စသငျ့ပွီထငျပါတယျနျော)
Let's get started. (စလိုကျကွပါစို့)
Welcome to Microsoft. (မိုကျခရိုဆော့ဖျမှကွိုဆိုပါတယျ ခငျဗြာ)
Thank you for coming today. (ဒီနေ့ ဒီကိုကွှရောကျလာတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ)
Good morning, ladies and gentlemen. (မင်ျဂလာနံနကျခငျးပါ ပရိတျသတျကွီးခငျဗြာ)
On behalf of Intel, I'd like to welcome you. (အငျတဲလျကုမ်ပဏီရဲ့ကိုယျစား ပရိတျသတျကွီးကိုကွိုဆိုပါရစေ)
My name's Jane Shaw. I'm responsible for travel arrangements. (ကြှနျမနာမညျ Jane Shaw ပါ။ ကြှနျမကခရီးသှားအစီအစဉျတှကေိုတာဝနျယူရပါတယျ။)
For those of you who don't know me, my name's Tom Stotter. (ကြှနျတေျာ့ကိုမသိသေးသူမြားအတှကျ ကြှနျတေျာ့နာမညျ Tom Stotter ပါ။)
As you know, I'm in charge of public relations. (အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျး ကြှနျတျော က ပွညျသူ့ဆကျဆံရေးအကွီးအကဲဖွဈပါတယျ။)
I'm the new Marketing Manager. (ကြှနျတျောကတော့ ဈေးကှကျမနျနဂြောအသဈဖွဈပါတယျ။)
This morning I'd like to present our new processor. (ဒီမနကျတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ပါမောက်ခအသဈကိုမိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။)
Today I'd like to discuss our failures in the Japanese market and suggestanew approach. (ဒီနေ့ ကြှနျတျောတို့ ဂပြနျဈေးကှကျမှာရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့အကွောငျးတရားတှကေို ဆှေးနှေးပွီး ခဉျြးကပျပုံနညျးလမျးသဈတဈခုအကွံပွုလိုပါတယျ။)
This afternoon, I'd like to report on my study into the German market. (ဒီနလေ့ညျခငျးမှာ ဂြာမနျဈေးကှကျအကွောငျး ကြှနျတေျာ့ရဲ့လလေ့ာမှုကို တငျပွလိုပါတယျ။)
(ဒီမနကျကြှနျတေျာ့ဆန်ဒကတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ မိုဘိုငျးဖုနျးစနဈသဈအကွောငျးပွောကွားလိုပါတယျ။)
If you have any questions, I'll be happy to answer them as we go along. (မေးစရာမေးခှနျးမြားရှိခဲ့ရငျမေးနိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျော ပွောနရေငျးနဲ့ ပွနျလညျဖွကွေားပေးသှားပါ့မယျ။)
Feel free to ask any questions. (မေးခှနျးမြားမေးကွပါ။ အားမနာပါနဲ့ခငျဗြာ။)
Perhaps we can leave any questions you have until the end? (မေးစရာမေးခှနျးမြားရှိခဲ့ရငျ အဆုံးကမြှမေးဖို့ဖွဈနိုငျမလားခငျဗြာ)
There will be plenty of time for questions at the end. (ကြှနျတေျာ့တငျပွမှုအဆုံးမှာ မေးခှနျးတှအေတှကျအခြိနျအမြားကွီးပေးထားပါတယျ။)
presentation တဈခုဟာ အဆငျ့သုံးဆငျ့၊ သို့မဟုတျ လေးဆငျ့ စသညျဖွငျ့အဆငျ့တှအေမြားကွီးရှိနိုငျပါတယျ။ ထိုသို့ တငျပွဆှေးနှေးနခြေိနျအတှငျးမှာ အပိုငျးတဈခုကနေ နောကျတဈပိုငျး၊ အခကျြတဈခကျြ ကနေ နောကျတဈခကျြပွောငျးတော့မယျဆိုရငျ ထိုသို့ပွောငျးတော့မယျ့အကွောငျး ပရိတျသတျလိုကျနိုငျအောငျ အခကျြပွစကားလေးတှပွေောပေးရပါတယျ။ ဒါကို signposting လို့ချေါပါတယျ။ ဒီလိုစကားစုလေးတှကေိုအလှတျကကျြမှတျထားမှသာစိတျဖိစီးမှုမြားတဲ့အခွအေနမှောအဆငျပွပွေနေဲ့ဆောငျရှကျနိုငျမှာပါ။
When you want to make your next point, you ‘move on’. နောကျအခကျြတဈခကျြပွောခငျြရငျ “move on” ဆကျသှားရပါမယျ။
Moving on to the next point. (နောကျတဈခကျြကိုပွောရရငျတော့)
I’d like to move on to the next point if there are no further questions (မေးခှနျးတှမေေးဖို့မရှိတော့ဘူးဆိုရငျ နောကျတဈခုကို သှားခငျြပါတယျ။)
When you want to change toacompletely different topic, you ‘turn to’. (လုံးဝခွားနားတဲ့
အကွောငျးအရာကိုပွောငျးပွောခငျြတဲ့အခါ “turn to” . . . ဘကျလှညျ့ ပါတယျ။
I’d like to turn to something completely different. (တခွားကှဲပွားတဲ့ အကွောငျးအရာတဈခုဘကျလှညျ့ခငျြပါတယျ။)
Let’s turn now to our plans for next year. (အခု နောကျနှဈအတှကျကြှနျတျောတို့ရဲ့စီမံကိနျးတှဘေကျလှညျ့ကွပါစို့။)
When you want to give more details aboutatopic you ‘expand’ or ‘elaborate’. အသေးစိတျအခကျြအလကျတှရှေငျးပွခငျြတဲ့အခါ ‘expand’ or ‘elaborate’ လုပျပါတယျ။
I’d like to expand more on this problem we have had in Chicago. (ရှီကာဂို ကကြှနျတျောတို့ရဲ့ပွဿနာအကွောငျးအကယျြတ၀ငျ့ဆှေးနှေးခငျြပါတယျ။)
(ဒီအကွောငျးနညျးနညျးထပျရှငျးပွစခေငျြသလား။ ဒါမှမဟုတျ အားလုံးသဘောပေါကျပါရဲ့လား။)
When you want to talk about something which is off the topic of your presentation, you ‘digress’. ကိုယျ presentation နဲ့မဆိုငျတဲ့ပွငျပကအကွောငျးအရာတဈခုကိုလမျးကွောငျးပွောငျး သှားခငျြတဲ့အခါ “digress” လုပျပါတယျ။
(ကြှနျတျောခဏလောကျဘေးခြျောပွီးဒီအစညျးအဝေးကိုစီစဉျပေးတဲ့ ဘော့ပျကို ကြေးဇူးတငျစကားလေးနညျးနညျးပွောပါရစေ။)
(အရငျပွောပွီးသားအခကျြတဈခုကိုပွနျညှနျးခငျြတယျဆိုရငျ “go back” လုပျပါတယျ။
(ခုဏလေးကပွောခဲ့တာကိုပွနျသှားရမယျဆိုရငျ ရှီကာဂိုကအခွအေနတှေဟော တကယျ့ကိုအရေးတကွီးဖွဈနပေါပွီ။)
(ဂနျြနီရဲ့ သူ့ Presentation ထဲမှာ ပွောခဲ့တာတဈခုကိုပွနျသှားခငျြပါတယျ။)
အခကျြတဈခု၊ ပွောခဲ့တာတှရေဲ့အကဉျြးခြုပျကိုပေးခငျြတဲ့အခါ “summarize” လုပျပါတယျ။
(ဂြိုးရဲ့အစီရငျခံစာကနေ အခကျြတဈခြို့ အကဉျြးခြုပျပွောရရငျတော့...)
(အခြိနျအမြားကွီးမကနျြတော့တဲ့အတှကျ ကနျြတဲ့အခကျြတှကေို အကဉျြးခြုပျပွောပါ့မယျ။)
ကိုယျပွောခဲ့တဲ့အကွောငျးအရာရဲ့ အဓိကအခကျြကိုပွနျထပျပွောခငျြတဲ့အခါ “recap” လုပျပါတယျ။
(ကြှနျတျောတငျပွသှားတာတှရေဲ့အဓိကအခကျြတှကေိုပွနျထပျပွောရရငျ. . . )
(နလေ့ညျစာမတိုငျခငျကပွောသှားတာတှကေို အမွနျပွနျဆှေးနှေးရရငျ . . .)
For your final remarks, you ‘conclude’. အဆုံးသတျမှတျခကျြ၊ ကိုယျ့ရဲ့သဘောထားကိုပွောခငျြတဲ့အခါ “conclude”လုပျပါတယျ။
(. . . ဆိုတဲ့ ဒီစိတျကူးလေးကို လူကွီးမငျးတို့ထံပေးခဲ့ရငျးနိဂုံးခြုပျလိုကျခငျြပါတယျ။)
(ကားလျမတျဈ ကိုကိုးကားပွီးနိဂုံးခြုပျရမယျဆိုရငျ . . .)
ဒီဆောငျးပါးပါ အခကျြအလကျအကွောငျးအရာအားလုံးရဲ့မူရငျးဟာ ဒီ http://www.effective-public-speaking.com/index.html ဆိုကျကဖွဈပါတယျ။
This morning I'd like to present our new processor. (ဒီမနကျတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ပါမောက်ခအသဈကိုမိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။) အစား This morning I'd like to present our new processor. (ဒီမနကျတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ပရိုဆကျဆာအသဈကိုမိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။) လို့ပွငျပွီးဖတျပေးပါရနျ။ ကြှနျတျောသသေခြောခြာမကွညျ့ဘဲမှားပွီးရိုကျမိလိုကျတာပါ။ အပျေါမှာပွငျလိုကျရငျအောကျက comment တှအေလကားဖွဈသှားမှာမလို့ပါ။
Permalink Reply by Thike Htun on June 11, 2012 at 11:16
Permalink Reply by Neyo Htway Lwyn on June 11, 2012 at 11:17
ကိုဇာနည်ရေ....အခုလို တင်ထားပေးတာ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..
ကျွန်နော်တခု ထောက်ပြလိုတာက...State the purpose of your presentation ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ "processor" ကို "ပါမောက္ခ" လို့ ဘာသာပြန်ထားတာ မှားနေတယ်ထင်လို့ပါခင်ဗျာ...
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on June 11, 2012 at 11:22
US ကတက္ကသိုလ်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ ဒီက တက္ကသိုလ်တွေမှာခေါ်တဲ့ ကထိကရာထူးတွေကို professor လို့ပဲသုံးတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ sense နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ပါမောက္ခလို့ပြန်တာ မှားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဒီကတက္ကသိုလ်တွေရဲ့အသုံးအနှုံးကိုပဲယူပြီး ပြန်လိုက်တာပါ။ မြန်မာတက္ကသိုလ်တွေမှာ ပါမောက္ခရာထူးကို professor လို့သုံးနေလို့ပါ။
Permalink Reply by Neyo Htway Lwyn on June 11, 2012 at 11:26
အခုလို ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Permalink Reply by May Thwe on June 11, 2012 at 12:25
Processor ?? Professor ??
Permalink Reply by Zaw Win on June 11, 2012 at 15:12
That is very useful for us.
Permalink Reply by khaing khaing soe on June 11, 2012 at 17:24
Permalink Reply by Phyo Thu on June 11, 2012 at 17:25
Permalink Reply by aung myo khaing on June 11, 2012 at 17:34
Permalink Reply by Htay Htay Aung on June 12, 2012 at 11:54
Permalink Reply by Khaing Myint Myint Min on June 12, 2012 at 12:18
Permalink Reply by Moe Moe Thu on June 12, 2012 at 14:38
မေးလို့ရရင် myomoethu.2008@gmail.com ကနေ မေးချင်ပါတယ်။